विचित्र संसार Archives - Hello Punarwas
खुट्टाले हवाइजहाज चलाउने पाइलट भदौ १६ काठमाडौ आउने र २१ गते फर्कने
काठमाडौ , भदौ १२ जहाजका ककपिटमा उनका हातका औला चल्दैनन,खुट्टाका औला चल्छन । अरुका लागि बोझ होइन,उत्साह र प्रेरणापुञ्ज बनिरहेकी छिन । तिनै जेसिका कक्स हवाइ जहाज उडाउन र साहसिक खेल खेल्न सक्छिन । ३४ बर्षीया जेसिका कक्स तेक्वाण्डेकी ब्लाकवेल्ट होल्डर…Read more
डाक्टरले सोचे १० वटा बच्चा, तर महिलाको पेटमा भेटियो ३२ किलोको ट्युमर
ती महिला जब अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् तब डाक्टरदेखि लिएर नर्ससम्म सबै हैरान थिए । उनको पेट देख्दा सबैले ठाने कि उनको पेटमा कम्तीमा पनि १० वटा बच्चा छन् । तर जब उनको पेटको अल्ट्रासाउण्ड गरेर रिपोर्ट हेरियो तब सबै…Read more
लक्जरी कार तस्करी गर्दागदै रंगेहात पक्रियो गधा
दक्षिण अफ्रिकामा एक अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । नदी समेत पार गराउँदै दक्षिण अफ्रिकाबाट लग्जरी कार तस्करी गरेर जिम्बाबे पूराउँदै गरेको अवस्थामा पुलिसले गधालाई पक्राउ गरेको छ । आखिर गधालाई लक्जरी कारको के काम ? आफूलाई काम नलाग्ने चिज…Read more
सम्बन्ध विच्छेद बढ्नुमा परेवा दोषी
लोग्ने स्वास्नीमा मतभेद बढ्नु नै सम्बन्ध विच्छेदको कारक हो । तर इण्डोनेसियामा भने मान्छेका पति पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद बढ्नुको दोष परेवालाई दिइएको छ । मध्य जाभा प्रान्तस्थित पूर्वालिंगा धार्मिक अदालतका अधिकारीका अनुसार उक्त अदालतमा जुलाई महिनामा मात्रै सम्बन्ध विच्छेदका ३०…Read more
यो संसारमा जंगलको कमी छैन यद्यपि पछिल्लो समयमा वनविनास चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । तपाईंले विशाल तथा अग्ला अग्ला रुखहरुका जंगल प्रशस्तै देख्नुभएकै होला । तर के तपाईंले सबै रुखहरु ९० डिग्रीमा बांगिएका बांगे जंगल देख्नुभएको छ ? पोल्याण्डमा रहेको…Read more
७४ वर्षकी महिलाले गोरुसँग बिहे गरिन्, कारण यस्तो छ
के तपाईंले कुनै महिलाले गोरुसँग बिहे गरेको सुन्नुभएको छ ? यस्तो विचित्र सुन्ने कुरै भएन । तर हालै एक ७४ वर्षकी महिलाले एउटा गोरुसँग बिहे गरेर सबैलाई अचम्ममा पारिन् । उनी अहिले दिनहुँ आफुले बिहे गरेको त्यो गाईको बाच्छोको हेरचाहमा…Read more
एयरपोर्ट जस्तै आर्यघाट, नाम छ ‘अन्तिम उडान मोक्ष यात्रा’
भारतमा एउटा यस्तो आर्यघाट छ जुन एयरपोर्टकै स्वरुपमा बनाइएको छ । उक्त आर्यघाटको नाम पनि अनौठो छ अन्तिम उडान मोक्ष यात्रा । आर्यघाटको नाम सुन्दैमा सबैलाई झसंग हुन्छ । त्यहीँ डरलाई हटाउने कोसिस गरेका छन् भारत गुजराँतका सोमाभाइ पटेलले ।…Read more
एक महिला जसलाई डाक्टरहरुले मृत घोषित गरेका थिए उनै महिलाले त्यसको १ सय २३ दिनपछि जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउनु कुनै चमत्कार भन्दा कम होइन । यो घटना दक्षिणी ब्राजिलको हो । जहाँ एक महिलाले मरिसकेपछि पनि जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएर सबैलाई अचम्ममा…Read more
अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्कोस्थित नाइन्थ सर्किटको पुनरावेदन अदालतले यस विषयमा सुनुवाई गर्दैछ । उक्त सेल्फीको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धित बाँदरकै हुनुपर्ने दाबी पेटाको छ ।संघीय न्यायाधीशले गत वर्ष बाँदरलाई कुनै पनि तस्वीरको प्रतिलिपि अधिकार दिन नसकिने फैसला गरेसँगै मुद्दाको वादी पक्षको रुपमा रहेको…Read more
५३ घण्टामा १ हजार व्यञ्जन !
भारतको नागुपरस्थित इन्ष्टिच्युट अफ इन्जिनियर्सको हलमा विशेष तरिकाले बनाइएको एक विशाल किचेनमा ग्यास स्टोभ र चिम्नीहरु लगाइयो । अनि सुरु भयो लगातार घण्टौँसम्म खाना पकाउने सिलसिला । शेफ विष्णु मनोहरले १२ वटा क्यामराको अगाडि ५३ घण्टासम्म एक हजार थरी शाकाहारी…Read more
बेहुला बेहुली जग्गेमा बसिसकेपछि पनि केही विवाद निस्किएर बिहे नै रद्द भएका घटना कहिलेकाहीँ सुनिन्छन् । यसरी बिहे रद्द गराउने घटना मामूली भने हुँदैनन् र कारण पनि ठूलै हुन्छन् । तर छिमेकी देश भारतमा चाहीँ एउटा रसगुल्लाको विवादमा भैरहेको बिहे…Read more
लेबनानमा बलात्कार सम्बन्धी कानूनमा संसोधनको माग गर्दै एउटा अभियान चलिरहेको छ । प्रदर्शनकारीहरुले बेरुतको एक चर्चित समुद्री तटमा एउटा डरलाग्दो दृश्य सिर्जना गर्ने कोसिस गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले त्यसका लागि तटमा रहेका खजूरका रुखहरुमा ३० भन्दा धेरै बेहुली पहिरनलाई…Read more
घाँसपात खाएर २५ वर्षदेखि बाँचिरहेका छन् यी व्यक्ति
कहिलेकाहीँ गरिबीका कारण मानिसको यस्तो आदत बस्दोरहेछ जसलाई मानिस धनी भएपछि पनि छाड्न सक्दैन । पाकिस्तानमा एक जना व्यक्तिको यस्तै आदत छ । ५० वर्षका मेहमूद बट पछिल्लो २५ वर्षदेखि रुखका पात, घाँस तथा काठ खाएर बाँचिरहेका छन् । २५…Read more
सुन्दरताले सबैलाई आकषिर्त गर्दछ । दुनियामा सबैभन्दा सुन्दर महिला कहाँ बस्छन् ? यसको उत्तर फरक फरक होला । तर हामीले जुन महिलाहरुको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, उनीहरु साँच्चीकै दुनियाका सबैभन्दा सुन्दर महिला हुन् जो कहिल्यै बुढी हुँदैनन्, रोगी हुँदैनन् । बुढ्यौली…Read more
यहाँका कोही बच्चा छन् प्रधानमन्त्री, त कोही कम्पनीका मालिक
यो गाउँमा गएको बेला तपाइँलाई यदि कसैले राष्ट्रपति बाख्रा चराउन गएको छ, प्रधानमन्त्री घरायसी सामान लिन बजार गएको छ भनेर भन्यो भने अचम्म नमान्नुहोला । किनकी भारतको राजस्थानस्थित बुँदी गाउँका बच्चाहरुमा कोही राष्ट्रपति छन्, कोही प्रधानमन्त्री त कोही विभिन्न मोबाइल…Read more
बिहेमा बेहुलाले राखे यस्तो माग, खुले सबैका आँखा
बिहे भन्ने कुरा जिन्दगीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण भएरै होला बिहेका विषयमा विभिन्न रितिरिवाज चर्चामा आउँछन् अनि यो महत्वपूर्ण क्षणलाई यादगर बनाउनका लागि मानिसहरुले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । हाम्रो देश तथा छिमेकी भारतमा समेत बिहेमा दाइजो प्रथा कायम छ ।…Read more
कुरुप पुरुषको कमेडी (भिडियोसहित)
गडफ्रे बगुमालाई युगान्डाको सबैभन्दा कुरुप मानिसको रुपमा लिइन्छ । मानिसहरु उनलाई हेर्न तथा उनको नजिक जान पनि मन पराउँदैनथे । उनको कुरुपताले नै होला सन् २००२ मा भएको उनको पहिलो विवाह टिकेन र उनकी पत्नीले उनलाई छाडिन् । छाडेर जाने बेलामा…Read more
एडिडास कम्पनीको स्थापना ९२ वर्ष पहिले अर्थात् सन् १९२४ मा भएको हो । तर ११ सय वर्ष पहिले मरेकी एक महिलाको खुट्टामा समेत ‘एडिडास जुत्ता’ फेला परेपछि त्यसले तहल्का मच्चाएको छ । मंगोलियामा ११ सय वर्ष पहिले मृत्यु भएकी एक…Read more
कालो जिउ र सबैभन्दा ठूला वक्षस्थल बनाउन युवतीले गरिन् ६५ लाख खर्च
अहिले सुन्दरता भन्ने चिजको कुनै कसी हुँदैन । एउटा व्यक्तिले सुन्दर मानेको चिज अर्को व्यक्तिका लागि कुरुप हुनसक्छ । हर कोहीका लागि सुन्दरताको परिभाषा फरक फरक हुन्छ । हाम्रो समाजमा गोरो तथा सलक्क परेको जिउडाल, सुन्दर मुखाकृति, पुष्ट वक्षस्थल तथा…Read more
हवाइजहाज भन्दा पनि महंगो छ यो कुकुरको मूल्य
कुकुरको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? तपाइँहामीले अहिलेसम्म हजार तथा लाखसम्म पर्ने कुकुरका बारेमा सुनेका थियौँ । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो कुकुर पनि छ जसको मूल्य हवाइजहाज भन्दा पनि बढ्ता छ । यो कुकुरको भाउ २५ देखि ५० करोड रुपैयाँ…Read more